Date My Pet » Can Pet Allergies sy hiara-hitoetra Dating?
Izany, efa nahita olona iray ianao fa te-hahafantatra bebe kokoa. Rehefa miresaka aminy, na amin'ny olona, ​​na amin'ny aterineto-, misy tsiky eo amin'ny tavanao. You feel that things couldn’t get any better than they are, ary dia mianatra fa manana biby izay mahazaka ianao. Inona ny olona iray hanao? No mila ho kivy ny fifandraisana noho ny allergy? Moa ve misy hafa azo asolo ny tsy nahita ny olona indray? Ho an'ny ankamaroan'ny olona, misy.
Voalohany indrindra, aoka ny olona fa manana ny allergy. Izany no zava-dehibe ny manana fifandraisana misokatra sy manao ny marina (mba hanomboka amin'ny), ary koa mba ho afaka nampihena ny fanehoan-kevitra fa ianao dia manana. Ahoana no ahafahan'izy ireo manao izany? Afaka manao antoka izy ireo manao akanjo vaovao alohan'ny daty (Tsy manana fifandraisana amin'ny biby rehefa natao niakanjo). Ankoatra izany, afaka manana lint borosy na zavatra mitovy amin'ny ampiasaina rehefa tonga noho ny daty (if their pet rides in the car and there is a transfer from the car to their clothes).
Ny faritra manaraka ny mifantoka dia ny mahafantatra ny hamafin'ny ny allergy. Afaka ianao no OTC allergy fanafody ary ho afaka hiatrika ny hariva? Sa manana fihetseham-po mafy izay mitaky EpiPen? Ho an'ireo izay mitaky ny EpiPen, dia tokony hijery ny fifandraisana eo amin'ny sehatra lehibe kokoa, because literally, your health is at risk. Ho an'ny hafa, afaka fotsiny manao antoka fa hitondra ny allergy fanafody alohan'ny azy ireo ny miaraka amin'ny, ary avy eo dia manara-maso ny fihetseham-toy ny mandeha amin'ny alina.
Raha mandany fotoana noho ny toerana, dia afaka hanorina efitrano izay ny biby fiompy dia tsy navela. Amin'ny maha-sosona koa ny fiarovana, afaka manana milina fanivanana hazakazaka hitandrina ny allergens avy amin'ny rivotra. Maro ny entana izay eny an-tsena ho an'ny marary ny allergy. Ireo vokatra dia hampihena ny habetsaky ny dander eny amin'ny rivotra, na ny asa ho toy ny sakana mba hitandrina ny allergens tsy hiditra amin'ny toerana voatondro.
Ho an'ny ankamaroan'ireo marary allergy, dia efa manana ireo Extras aminy, fa tsy hanimba ny hamerina azy ireo. Ho azo antoka foana ianao manana sela akaiky. Raha manana allergies izay mahatonga itchy, rano maso sy kokoa, mety mieritreritra hoe tsy misy manintona ny daty raha oronao dia nihazakazaka foana na dia mijery toy ny hoe ianao no mitomany. Afaka manana maso allergy latsaka aminareo koa. This will not only help flush the allergens from your eyes but will also help with the redness and irritation that will be present.
Allergies ve ny mahatonga anao ho kohaka? Kohaka nilatsaka sy ny tenda no tena ilaina lozenges ny manana adin-tsaina nahena daty. How many times have you gotten a tickle in your throat and the more you cough the drier your throat gets? Misy lozenges na vatomamy sarotra dia afaka manampy ampy hamandoana fotsiny mba handray ny hahafinaritra lavitra sy akanjo lava ny tendanao mba hahafahanao hifantoka amin'ny daty.
Amin'ny misokatra, manao ny marina kely ny fifandraisana sy ny fiomanana, ianao dia mbola afaka manana fifandraisana mahafinaritra na dia manana ny allergy ny biby.